October 2019 - Ministry of Education | Page 2
Date : 25 October, 2019
October 25, 2019 - 10:55 pm | Video
(၉၉)နှစ်မြောက် အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ ကျင်းပရေးဗဟိုကော်မတီ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၂၁-၂၀၃၀) ရေးဆွဲပြုစုရေး ပထမအကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ(ဒုတိယနေ့) ဆက်လက်ကျင်းပ
October 25, 2019 - 10:15 pm | News
Comments Off on အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၂၁-၂၀၃၀) ရေးဆွဲပြုစုရေး ပထမအကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ(ဒုတိယနေ့) ဆက်လက်ကျင်းပ
နေပြည်တော်အောက်တိုဘာ၂၅ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၂၁-၂၀၃၀) ရေးဆွဲပြုစုရေး ပထမအကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (ဒုတိယနေ့)ကို ယနေ့နံနက်၉နာရီတွင် နေပြည်တော်၊ မင်္ဂလာသီရိဟိုတယ်၌ ကျင်းပရာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရှိ ဦးစီးဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများက
October 25, 2019 - 8:49 am | News
Comments Off on (၉၉)နှစ်မြောက် အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ ကျင်းပရေးဗဟိုကော်မတီ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၂၅ (၉၉)နှစ်မြောက် အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ ကျင်းပရေးဗဟိုကော်မတီညှိနှိုင်း အစည်း အဝေးကို ယနေ့နံနက် ၁၀နာရီတွင် နေပြည်တော် ပညာရေး၀န်ကြီးဌာန ရုံးအမှတ်(၁၃) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Andrea Faulkner နှင့်တွေ့ဆုံ
October 25, 2019 - 8:22 am | Album
Comments Off on ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Andrea Faulkner နှင့်တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၂၅ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် ၂၅-၁၀-၂၀၁၉ ရက် နေ့လည် ၁ နာရီတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး
Date : 24 October, 2019
October 24, 2019 - 10:09 pm | Video
အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၂၁- ၂၀၃၀) ရေးဆွဲပြုစုရေး ပထမအကြိမ် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
Total Hits : 1141863068